विश्वकै चर्चित कमेडियन जुआनको नि’धन – eSidhakura
मुख्य पृष्ठUncategorizedविश्वकै चर्चित कमेडियन जुआनको नि’धन
चर्चित स्पेनिश कमेडियन तथा अभिनेता जुआन जो’या बो’र्जाको ६५ वर्षको उमेरमा नि’धन भएको छ। विश्वकै मिम दुनियाँमा उनको हाँ’सो सर्वाधिक भाइरल मानिन्छ। सामाजिक सञ्जालमा ‘एल रि’सिटस’ अर्थात् ‘हाँ’सो’ नामले परिचित जुआनको बुधबार राति नि’धन भएको हो।
सन् २०२० देखि जुआनको खुट्टामा स’मस्या देखिएको थियो। त्यसयता उनी दे ला का’रिडाड अस्पतालमा भर्ना भएका थिए। उक्त अस्पतालले जु’आनलाई भ’र्जेन देल रो’कियो अस्पतालमा सारेको थियो। सोही अस्पतालमा उपचारको क्रममा उनको मृ’त्यु भएको हो।
एउटा अन्तर्वार्तामा जु’आन हाँ’सेको भिडियाे क्लिप सन् २०१४ मा विश्वभर भाइरल भएको थियो। उनी हाँ’सेको भिडियो क्लिपलाई सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ताहरूले विभिन्न विषयमा जो’ड्दै मि’म बनाउदै आएका छन्। त्यस्तै भारतका चर्चित टेलिभिजन पत्रकार रोहित स’रदानाको नि’धन भएको छ।
केही दिनअघि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएका पत्रकार रोहितको आज (शुक्रबार) बिहान हृ’दयघा’तबाट नि’धन भएको हो। कोरोना संक्रमणको रिपोर्ट भने नेगेटिभ आइसकेको भा’रतीय सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएका छन्। भारतका ठूला सञ्चारमाध्यमहरुमा लामो समय टेलिभिजन पत्रकारित गरेका रोहितको नि’धनले सञ्चार क्षेत्र दुः’खी बनेको छ।
४० वर्षीय रोहितले २४ अप्रिलमा एक ट्वि’ट गर्दै आफूलाई कोरोना संक्रमण भएको बताएका थिए। त्यतिबेला उनले आफूलाई एक हप्तादेखि ज्व’रो लगायतका लक्षण देखिएको र आ’रटीपीसीआर गर्दा कोरोना ने’गेटिभ देखिएको तर सी’टीस्क्यान गर्दा कोरोना पुष्टि भएको बताएका थिए।
उनले आफ्नो अवस्थामा धेरै सु’धार भएको भन्दै सबैलाई खाफ्नो स्वा’स्थ्यको ख्याल राख्न सु’झाव दिएका थिए। तर त्यसको ६ दिनपछि उनको नि’धन भएको हो। केहीबेर अघि जी न्यूज टीभीका सम्पादक सुधिर चौधरीले रोहितको नि’धन भएको पुष्टि गरेका हुन्। उनको नि’धनप्रति भा’रतीय जनता पार्टीका नेता, मन्त्री एवम् विभिन्न राजनीतिक द’लका नेताहरुले पनि दुः’ख व्यक्त गरेका छन्।
भारतमा को’रोना संक्रमण : जहाँ मृ’त्यु पनि लु’काइन्छ
जवानीमा हाई हाई, म’र्ने बेलामा कोही न कोही ! चर्चित कलाकारको दु’खद नि’धन
डब्ल्यूएचओले भन्यो : नेपालको अवस्था चि’न्ताजनक
काठमाडौं उपत्यकामा ३,३४९ जनामा संक्रमण पुष्टि
ओलीको मन्त्रिमण्डलमा कोको भए मन्त्रि ? (नामवलीसहित)
Breaking: काठमाडौँमा निषेधाज्ञा थप १५ दिन लम्ब्याउने निर्णय